काठमाडौं, २६ चैत – अान्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन नपाएका अस्थायी शिक्षकहरू अान्दाेलित भएका छन् । २०७२ सालदेखि अस्थायी सेवामा प्रवेश गरेका शिक्षकहरू अान्दोलनमा उत्रिएका हुन् । स्वत्तः नभइ परीक्षा दिएर स्थायी हुन्छौं भन्ने मागसमेत सरकारले नसुने पछि छुट करार शिक्षकहरु पुनः आन्दोलित भएका हुन् । एकदिन अघि नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षकहरुले आन्तरिक परीक्षा दिन पाएपनि […]
काठमाडौं , २६ चैत – प्रतिवन्धीत विप्लव समूहको नेकपाले वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना गर्दे नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ । सोमबार बिज्ञप्ती जारी गर्दे नेकपाका महासचिव विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार र राम बहादुर थापा नेतृत्वको गृह प्रशासनले पार्टीमाथि गरेको प्रतिबन्ध र दमनको विरोध गर्दै नेपाल वन्द आह्वान गरेको हो । नेकपाले चैत्र २६ गतेदेखि […]
सम्झनामा २०४६ चैत २६ : वीर अस्पतालबाट ३ ट्रक लास फाल्न लगियाे
काठमाडौं, २६ चैत- उपत्यका र मोफसलमा दर्जनौं मानिसले ज्यान गुमाइसकेका थिए तर साहसलाई झन् झन् ज्याद्रो पार्दै लग्ने प्रवृत्तितर्फ मानिस हुरुक्क हुँदै गए । देश विदेशबाट भएका निन्दा र आलोचनाले लोप्नो पारेर चुटिएपछि सरकार काँप्रिन थाल्यो, प्रहरी आत्तिन थाले । चैत २३ गते साँझ घोषणा भयो–प्रातः ६.४५ बजे शाही घोषणा हुनेछ भनेर । आन्दोलनले ४८ […]
बारा र पर्साका हावाहुरी र पीडितहरुको सहयोगार्थ एनआरएन बेल्जियमले पठयो राहत रकम । बेल्जियम, २५ चैैैत – गैर अावासिय नेपाली संंघ बेल्जियमलेे नगद राहत रकम पठाएको छ । संघले बेल्जियम रहेका नेपाली हरू र संंघकाे अान्तरिक काेेषकाे रकम गरि राहत रकम पठाएको संघका लाेक दाहालले जानकारी दिनुभएको छ । हालै मात्र नेपालको बारा र पर्सा […]
गृहकाे अादेश उल्टयाउँदै सर्वाेच्च अदालत, कसरी चल्छ राज्य ?
काठमाडौं , २५ चैत – जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु भन्ने गृह मन्त्रालयको सर्कुलर कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सर्कुलर तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते देशभरका सबै जिल्ला […]
काठमाडौं , २५ चैत – मुलुकमा १८ घण्टा लाेडसेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो नेपाल बनाउन सफल नेपाल विदुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिजाे लाेडसेडिङ गराउनेहरू नै अहिले अाफ्ना विरूद्व सलबलाएका बताएका छन् । नागरिकले हामीलाई थप काम गर्ने उर्जा दिइरहेका छन्, हामीप्रति नागरिकले गरेको भरोसा देखेर हामीलाई काम गर्ने थप जाँगर पैदा हुन्छ । नागरिकलाई […]
विमानकाे शाैचालयमा २३ किलाे सुन भेटियाे
काठमाडौं, २५ चैत- बङ्गलादेशको दोस्रो ठूलो चट्टोग्राम विमानस्थलमा विमानको शौचालयमा वेवारिसे अवस्थामा छोडिएका झण्डै २०० वटा सुनका सिक्का विमानस्थल भन्सार अधिकारीले सोमबार बरामद गरेका त्यहाँको सुरक्षा स्रोतले जानकारी गराएको छ । सुनको तौल २३ किलोभन्दा बढी भएको र सुनसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई पनि पक्राउ नगरिएको एक जना भन्सार अधिकारीले जनाएका छन् । भन्सार गुप्तचर विभागका अधिकारीले आफ्नो […]
के के छन् आन्दोलनरत सरकारी डाक्टरको माग ?
काठमाडौं, २५ चैत । देशभरका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा करिब १ सय ६० सरकारी अस्पताल छन् । ४ हजार स्वास्थ्य चौकी र २ सय बढी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । ती सबैमा १ हजार ४ सय सरकारी चिकित्सक कार्यरत छन् । सरकारी चिकित्सकहरुको मुख्य माग नै समायोजन गर्दा सबैलाई केन्द्र सरकार मातहत राखियोस् […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,मुख्य समाचार,स्वास्थ्य / जीवनशैली Read More »
कतार, २५ चैत । सभामुख कृष्णबहादुर महराले कतारको दोहामा जारी अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपियू) को १ सय ४० औं सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । आइपियूको सभामा सभामुख महराले “Parliaments as platforms to enhance education for peace, security and rule of law” विषयमा केन्द्रित रहेर सम्बोधन गर्नुभएको हो । सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले नेपालको संसदले लोकतान्त्रिक […]
सरकारी चिकित्सककाे अान्दोलनले बिरामीकाे बिचल्ली
सराेज ढुंगेल/ काठमाडौँ, २५ चैत । आइतबार सरकारको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो अस्पताल वीरमा स्वास्थ्य सेवाका लागि आएका सयौं बिरामीले उपचार पाउन सकेनन् । वीर अस्पताल मात्र होइन, वीर जस्तै अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि बहिरंग सेवा नपाउँदा हजारौं बिरामी उपचारबाट बञ्चित भए । आइतबार वीर अस्पताल परिसरमा ५७ वर्षीय शरणदास खड्का टोलाएर बसिरहनुभएको थियो । प्युठानबाट […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,पत्रपत्रीकाबाट,मुख्य समाचार,स्वास्थ्य / जीवनशैली Read More »